IVA 0.8T ၈၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
မ်ာဒယ်- IVA 0.8T
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: IVA0.8T
IVA 0.8T 800Kg Industrial Tube Ice Making Machine (100% New) is produced according to the most advanced technology in 2019.
Nowadays, along with the social and economic development, the water is increasingly polluted so the demands for pure water are more and more essential. To meet these increasing demands, Viet An has researched and produced our ice making machines, applying the American technology. These machines help to provide the customers with pure ice.
လူမှုရေးနဲ့ စီးပွါးရေး တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာ ရေညစ်ညမ်းမှုတွေ များပြားလာပြီး ရေသန့်အပေါ် ပိုပြီး ပိုပြီး မှီခိုလာရပါတယ်။ ဒီလို တိုးပွါးလာတဲ့ မှီခိုမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ Viet An မှ အမေရိကန် နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး ရေခဲထုတ်စက်တွေ ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ ဒီစက်တွေက ဝယ်ယူသူတွေကို သန့်စင်သော ရေခဲတွေ ပေးစွမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
IVA 0.8T 800Kg Industrial Tube Ice Making Machine (100% New)
IVA 0.8T ၈၀၀ ကီလိုဂရမ် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)
ISO 9001:2015 Certificate IVA 0.8T 800KG Stainless Steel Tube ice making machines are assembled according to ISO 9001:2015 - the international strictest quality standards. The product has been recognized as an exclusive brand No. 250970 under the brand name of VA by the National Office Of Intellectual Property Of Vietnam. Our ice making machines are distributed in both Vietnam and ASEAN markets under the best prices.
ISO 9001:2015 လက်မှတ်- IVA 0.8T ၈၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်ကို နိုင်ငံတကာ အတင်းကြပ်ဆုံး စည်းမျဉ်းဖြစ်တဲ့ ISO 9001:2015 အတိုင်း တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းကို ဗီယက်နမ် မူပိုင်ခွင့်ရုံးမှ VA တံဆိပ် ကုန်ပစ္စည်းအမည်အောက်တွင် မူပိုင်ခွင့် နံပါတ် ၂၅၀၉၇၀ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။
With the application of the most advanced technology of the United States, IVA 0.8T 800KG Stainless Steel Tube ice making machine can save up to 45% energy compared to other machines in the market, These machines are produced inaclosed process so the finished products of cube ice all meet the food hygiene and safety standards No. 6-1:2010/BYT of the Ministry of Health.
US ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး နည်းပညာအပလီကေးရှင်းကြောင့် IVA 0.8T ၈၀၀ ကီလိုဂရမ် စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်က ဈေးကွက်က အခြားစက်တွေထက် အင်နာဂျီ ၄၅% ထိ ချွေတာပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်တွေကို သီးသန့်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် လုပ်ဆောင်မှုပြီးသွားတဲ့ ရေခဲတုံးတွေက ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ အစားအသောက် လုံခြုံစိတ်ချမှု စည်းမျဉ်း No. 6-1:2010/BYT နဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
Liquid and gas separation system is Viet An’s unique innovation that no other manufacturers in the market have. Before this system, the lines of the ice making machines are lengthy and designed in chicken gut shapes. However, with the application of this advanced technology, the line length has been remarkably reduced. As the compressor typically utilizes cooled air to operate and discharges the hot air, there must be no liquid remained in the inlet air (water or oil), otherwise, the machine’s shelf life would be dramatically reduced. The liquid and gas separation system is therefore designed to separate liquid from the inlet air to ensure no liquid remains in the air before it is routed into the airline in order for the compressor to operate smoothly, thereby improving the machine's shelf life.
အရည်နဲ့ အငွေ့ခွဲထုတ်ပေးသောစက်က ဈေးကွက်မှာ မရှိတဲ့ Viet An ရဲ့ ထူးခြားချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်မရောက်ခင်မှာ ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ လိုင်းတွေက ရှည်ပြီး ကြက်အူတိုင်လို ပုံမျိုးရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ နည်းပညာနဲ့ လိုင်းရဲ့ အရှည်ကို အတိုချုံ့ပေးပါတယ်။ ဖိအားသိပ်စက်က လေပူကို ထုတ်ပြီး လည်ပတ်ဖို့ လေအေးကို အသုံးပြုပါတယ်။ လေ(ရေ၊ ဆီ) လက်ကြားမှာ ရေလုံးဝ မကျန်ရပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ် စက်ရဲ့ သက်တမ်း တိုသွားနိုင်ပါတယ်။ အရည်နဲ့ အငွေ့ ခွဲထုတ်ပေးသောစနစ်ကို လေလက်ကြားမှ ရေကို ခွဲထုတ်ရန်၊ လေလမ်းကြောင်းတွင် မလည်ပတ်ခင် လေထဲမှာ ရေတွေမကျန်ရှိတာ သေချာရန် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ သို့မှသာ ဖိသိပ်စက်က ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နိုင်ပြီး စက်ရဲ့ သက်တမ်းရှည်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The cooling tower transfers excess heat of water out to make it cool quickly, ensuring energy saving.
အေးသောတာဝါက ရေအပူချိန်ပိုကို ဖယ်ထုတ်ပြီး လျင်မြန်စွာအေးစေကာ အင်နာဂျီချွေတာပေးပါတယ်။
All our condensers are genuine imported products and are sold at the most reasonable prices. During the ice making process, the condenser is used to condense the overheated gas from the compressing process intoaliquid refrigerant. The condenser performance hasadecisive influence on the condenser pressure and temperature, thus affects the efficiency and safety of the entire cooling system.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေသည့် ကိရိယာတွေက စစ်မှန်ပြီး အသင့်တော်ဆုံး ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချပေးပါတယ်။ ရေခဲထုတ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာ ဒီစက်ကို ဖိအားသိပ် လုပ်ငန်းစဉ်မှ အရည်ကို အေးစေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းစဉ် အပူလွန်နေတဲ့ အငွေ့ကို အရည်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီစက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုက အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေတဲ့ ဖိအားနဲ့ အပူချိန်အပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိတာကြောင့် အေးစေသော စနစ်တစ်ခုလုံးရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုနဲ့ လုံခြုံမှုအပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။
ရပ်ပေးသော အဆို့ စနစ်
All our stop valve systems are genuine imported products.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရပ်ပေးသော စနစ်အားလုံးက စစ်မှန်ပြီး တင်ပို့ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
The electrical system enables an absolutely automatic manufacturing process. The system will automatically stop when there is an electrical problem incurred and adjust the time foradesirable void. For the best performance, it is recommended to installa3 phase power - 380V.
အော်တိုလျှပ်စစ် စနစ်က အော်တို ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ဆောင်မှုကို ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ပြသနာ တစုံတရာပေါ်ပေါက်တဲ့အခါ စနစ်က အော်တိုရပ်သွားပြီး အချိန်ညှိပေးပါတယ်။ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ၃ ဆင့်ပါဝါ-၃၈၀ ဗို့ကို အသုံးပြုဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
Formerly known as Viet An General Trading Limited Company and equitized in August 2009, Viet An General Trading Joint Stock Company is the leading company in manufacturing, importing and distributing the ice making machines, RO purified water filtration systems, bottle filling machines, bottle blowing machines, etc. It is recognized as an exclusive brand name of VA, USApec, Vinaro. The company was established under the business license No. 013039593 by Hanoi Department of Planning and Investment on August 4, 2009. Third amendment registration was on November 4, 2015, under the business license No. 0102966635.
Viet An General Trading Limited Company လို့ သိခဲ့ကြပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ Viet An General Trading Joint Stock Company လို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီက ရေခဲထုတ်စက်၊ RO ရေစစ်၊ ဘူးတွေကို လောင်းဖြည့်ပေးသောစက် စတာတွေကို ထုတ်လုပ် တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးတဲ့ နေရာမှာ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ VA, USApec, Vinaro စတဲ့ တံဆိပ်တွေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ဟနွိုင်း စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဋ္ဌာနရဲ့ စီးပွါးရေးလိုင်စင်အမှတ် ၀၁၃၀၃၉၅၉၃ အောက်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ တတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်ခဲ့တာကတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ပြီး စီးပွါးရေးလိုင်စင် နံပါတ် ၀၁၀၂၉၆၆၆၃၅ အောက်တွင် ဖြစ်ပါတယ်။
With the motto of “Put the customers’ benefits first” and attractive incentives, Viet An's products have been widely chosen byavariety of customers both domestically and internationally.
ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ဦးစားပေးပါတယ် ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ထားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကြောင့် Viet An မှ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ဝယ်ယူသူများမှ ကျယ်ပြန့်စွာ ရွေးချယ်ကြပါတယ်။
We have achievedanumber of prestigious awards, including: Gold Medal Vietnam High Quality Goods in 2009; Golden Lotus Cup - Vietnamese High-Quality Goods awards (2009) and many other prestigious awards.
ကျွန်တော်တို့က ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဗီယက်နမ် အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်း ရွှေတံဆ်ိပ်ဆု၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းများ ရွှေကြာတံဆိပ်ဆု တို့အပါအဝင် ဆုများစွာ ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။
Asaleading brand in the bottled water industry, we have been misrepresented in the reputation and quality with the false and unfounded information such as “Viet An scams the customers”. However, we have successfully proven the opposite with the customers’ trust over the years and made unceasing efforts to bring the customers the best values.
ရေဘူးစက်ရုံမှာ ဦးဆောာင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တာနဲ့အညီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တံဆိပ်ကို အတုပြုလုပ်သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ ထို့အပြင် Viet An မှ ဝယ်ယူသူတွေကို လိမ်လည်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှားတွေလည်း ဖြန့်ဝေကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့က ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ယုံကြည်မှု၊ ဝယ်ယူသူတွေကို မလျှော့သောဇွဲများနဲ့ အကောင်းဆုံး ပစ္စည်းတွေ ပေးဆောင်မှုတွေနဲ့ သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
Besides, we have achieved ISO 9001:2015 International Quality Control Certificate thanks to our efforts.
ထို့အပြင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားထုတ်မှုကြောင့် နိုင်ငံတကာ ကွာလတီ ထိန်းချုပ် လက်မှတ်ဖြစ်တဲ့ ISO 9001:2015 ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
IVA 0.8T 800KG Stainless Steel Tube ice making machine can be used to produce ice of different sizes
IVA 0.8T ၈၀၀ ကီလိုဂရမ် စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်ကို ရေခဲ အရွယ်အစား မျိုးစုံထုတ်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
-အမျိုးအစား ၃ ကို ၃၄×၄၀ မီလီမီတာ အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး လက်ဖက်ရည်အေး၊ ဝိုင်တွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ဒီအရွယ်အစားက သောက်စရာတွေအတွက် လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
-အမျိုးအစား ၄ ကို ၁၈×၃၀ မီလီမီတာ အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး ကော်ဖီ၊ အသီးဖျော်ရည် စတာတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ အပေါ်က အရွယ်အစား ၃ ခုထက် ပိုပြီး အရည်ပျော်မြန်ပေမယ့် ဒီအမျိုးအစားက သောက်စရာတွေကို လျင်မြန်စွာ အေးစေပါတယ်။
From the above information, you can choose the best machine to meet your demands.
အပေါ်က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်အလက်မှ သင့်အကြိုက်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
To enhance the performance of the ice making machines, please consider below accessories:
ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို မြှင့်တင်ဖို့ အောက်က အဆင်တဆာတွေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
When choosing our products, you can totally feel secure about the quality and prices. In addition, we also have experienced and qualified technical teams to support you promptly and effectively per your requests. - We commit to provide you with the best IVA 0.8T 800KG Stainless Steel Tube ice making machine. Contact us now for free consultation if you have any inquiries. Hotline: +84 839 31 31 31
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် ကွာလတီနဲ့ ဈေးနှုန်းအတွက် သင်လုံးဝ စိတ်ချရမှာပါ။ ထို့အပြင် ကျွန်တော်တို့မှာ အတွေ့အကြုံရှိပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ နည်းပညာအသင်းမှ သင့်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သင့်ကို အကောင်းဆုံး IVA 0.8T ၈၀၀ ကီလိုဂရမ် စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်မှာ သိချင်တာရှိရင် +၈၄ ၈၃၉ ၃၁ ၃၁ ၃၁ ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး အခမဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
Hỏi đáp & đánh giá ၈၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်း(၁၀၀% အသစ်)